भारतले बाटो नदिएपछी जोखिम मोलेर छाङरु पुग्यो जनगणना टोली ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारतले बाटो नदिएपछी जोखिम मोलेर छाङरु पुग्यो जनगणना टोली !
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङरु र तिकंर गाउँको जनगणनाका लागि जनगणना कार्यालय दार्चुलाको टोली तीन दिनको जोखिमपूर्ण पैदल यात्रा गर्दै छाङरु पुगेको छ । दार्चुलाका जिल्ला जनगणना अधि कृत पदमराज पाण्डेका अनुसार शुक्रबार खलंगाबाट प्रस्थान गरेको सहायक जनगणना अधिकृत खगेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोली सोमबार दिउँसो १२ बजे छाङरु पुगेर जनगणना सुरु गरिसकेको छ ।
छाङरु र तिकंर दुबै गाउँमा जनगणना गरिसक्न तीन दिन लाग्ने पाण्डेले बताउनुभयो । चिसो छल्न तिकंरबासी बेँसी झर्न थालेकोले जनगणना गर्न चुनौती थपिएको छ। जनगणना अधिकृत पाण्डेले भन्नुभयो, केहि स्थानीयहरु चिसो छल्न बेँसी झरिसकेको खबर सुन्नमा आएको छ, त्यहाँका गणक राजेन्द्र कार्की हिड्न नसक्ने भएपछि खलंगामै छन, गणक खटाएर बेँसी झरेका स्थानीयहरुको गणना खलंगामै गरिनेछ ।
व्यास गाउँपालिका–१ बाहेक जिल्लाका अरु वडाहरुको जनगणना कार्य भने अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालतर्फको बाटो निकै असहज भएकोले भीर पहरामा हिँड्दा ज्यानको समेत जोखिम हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर गणकहरु फर्किदा हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको छ । हेलिकोप्टरका लागि विभागसंग समन्वय भइरहेकोले फर्किदासम्म हेलिकोप्टरको व्यवस्था हुन सक्ने सम्भावना रहेको जनगणना अधिकृत पाण्डेले बताउनुभयो ।
नेपालतर्फ सुरक्षित बाटो नहुदा व्यास गाउँपालिकाका स्थानीयहरु भारतीय बाटोको प्रयोग गर्दै सदरमुकाम खलंगाबाट गाउँसम्म आवत जावत गर्दै आएका छन् । भारतले गणकलाई बाटो नदिदा सहायक जनगणना अधिकारी खगेन्द्र कार्की र कार्यालय सहयोगी लोकेन्द्र टेर नेपालतर्फकै जोखिमपूर्ण बाटो हुँदै व्यास पुगेका हुन् । तर लालाबाला, बस्तुभाउ सहित उक्त बाटो भएर सदरमुकाम पुग्न सकिने अवस्था नरहेको स्थानीय हरक कार्कीले बताउनुभयो ।
भारतले गणकलाई मात्रै जान नदिएको तर स्थानीयहरु पास लिएर अहिलेपनि आवत जावत गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिद्धराज जोशीले बताउनुभयो । विवा’दित क्षेत्रमा गएर पनि जनगणना गर्छ कि भन्ने आशंकाले गणकलाई पास नदिएको हुन सक्ने उहाँको भनाई छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
झापाको बिर्तामोडमा अर्धन ग्न अवस्थामा एक युवतीको शव फेला
भागरथी पछि निर्मला घटनाले पनि लियो यस्तो मोड, गृहमन्त्रीले गरे खुलासा
बैंकका ऋणीहरुलाई खुशीको खबर, केन्द्रीय बैंकले जारी गर्यो यस्तो निर्देशन